Abụ Ọma 40 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 40:1-17
Kelee Chineke, onye na-enweghị atụ
Ọrụ Chineke dị ọtụtụ, e nweghị ike ikwucha ha (5)
Ihe ka Chineke mkpa abụghị ka a chụọrọ ya àjà (6)
“Ime uche gị na-atọ m ụtọ” (8)
Maka onye na-eduzi abụ. Abụ Devid. 40 M tụsiri anya ike ka Jehova nyere m aka. O wee gee m ntị* ma nụ ákwá m na-ebe ka o nyere m aka.+ 2 Ọ dọpụtara m n’olulu nke mmiri dị na ya na-ekwo ekwo,N’apịtị na-amị amị. O mekwara ka m guzoro ná nnukwu nkume. O mere ka ụkwụ sie m ike n’ala. 3 O wee kụziere m abụ ọhụrụ,+Abụ m ga-eji too Chineke anyị. Ọtụtụ ndị ga-ahụ ihe Chineke mere, ya erie ha ọnụ,Ha atụkwasịzie Jehova obi. 4 Onye tụkwasịrị Jehova obi na-enwe obi ụtọ,Ya bụ, onye na-anaghị eso ndị isi ike ma ọ bụ ndị ụgha. 5 Jehova bụ́ Chineke m,Ihe ndị i merela karịrị akarị,Ya bụ, ọrụ ndị dị ebube ị na-arụ na ihe ndị ị na-echere anyị.+ E nweghị onye a ga-eji tụnyere gị.+ Ọ bụrụ na mụ asị ka m gbalịa kwuwe banyere ha,Ha dị nnọọ ọtụtụ nke na enweghị m ike ikwucha ha.+ 6 Ihe ị chọrọ abụghị àjà na onyinye,+Kama, i meghere ntị m ka m nụ ihe.+ I kwughị ka a chụọrọ gị àjà a na-esu ọkụ na àjà mmehie.+ 7 M wee sị: “Lee, abịala m. E dere banyere m n’akwụkwọ mpịakọta.+ 8 Chineke m, ime uche gị na-atọ m ụtọ,+Iwu gị dịkwa n’ime ime obi m.+ 9 M na-anọ n’ọgbakọ buru ibu ezisa ozi ọma banyere ezi omume gị.+ Jehova, ị ma nke ọmaNa anaghị m emechi ọnụ m.+ 10 Anaghị m ezochi ezi omume gị n’ime obi m. M na-akọsa na ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi nakwa na ị na-azọpụta ndị gị. Anaghị m ezo ịhụnanya gị* na eziokwu gị ezo n’ọgbakọ buru ibu.”+ 11 Jehova, ahapụla imere m ebere. Biko, na-echebe m mgbe niile n’ihi ịhụnanya gị* nakwa n’ihi na ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi.+ 12 Ọdachi ndị na-abịara m karịrị akarị nke na enweghị m ike ịgụta ha ọnụ.+ Mmehie m dị nnọọ ọtụtụ nke na anaghị m ahụ ụzọ.+ Ha dị ọtụtụ karịa ntutu isi m,Obi adaakwala m mbà. 13 Jehova, biko, zọpụtanụ m.+ Jehova, biko, bịa ngwa ngwa nyere m aka.+ 14 Ka ihere mee ndị niile na-achọ igbu m,*Ka e mechuokwa ha ihu. Ka ndị obi na-atọ ụtọ na ọdachi dakwasịrị mGbaghachi azụ n’ihere. 15 Ka ihere megbuoNdị na-asị m: “Ntọọ! Ntọọ!” 16 Ma, ka ndị niile na-achọ gị+Nwee obi ụtọ ma ṅụrịa ọṅụ n’ihi gị.+ Ka ndị obi na-atọ ụtọ na ị na-azọpụta ndị gị na-ekwu mgbe niile, sị: “Ka e too Jehova.”+ 17 Ma, m bụ ogbenye, e nweghịkwa onye na-enyere m aka. Ka Jehova gee m ntị. Ọ bụ gị na-enyere m aka, ọ bụkwa gị na-anapụta m.+ Chineke m, biko, egbula oge.+
^ Ma ọ bụ “hulata gee ntị.”
^ Ma ọ bụ “na-achọ mkpụrụ obi m.”
Abụ Ọma 40